Fe + (CH3COO)2Cu = Cu + (CH3COO)2Fe | ဓာတုညီမျှခြင်း
သံ + Crystallized verdigris = ကြေးနီ + |
သံ Crystallized verdigris; ဗီးနပ်စ်၏ကြည်လင်; ကြားနေဝါဒ; diacetic acid ကိုကြေးနီ (II ကို) ဆား; Diacetoxycopper (II)၊ ကြေးနီ acetate; Bisacetic acid copper (II) ဆား၊ ကြေးနီကြည်လင် ကြေးနီ
ညီမျှခြင်း Fe အကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များ + (CH3COO)2Cu → Cu + (CH3COO)2Fe
Fe (သံ) ၏ တုံ့ပြန်မှု အခြေအနေ ဟူသည် (CH3COO) 2Cu (အအေးခံထားသော ကြေးညှိများ၊ ဗီးနပ်စ်၏ သလင်းကျောက်များ; နျူထရယ်လ်ဆန်များ; Diacetic acid copper(II) ဆား၊ Diacetoxycopper(II)၊ Copper acetate; Bisacetic acid copper(II) ဆား၊ ကြေးနီပုံဆောင်ခဲ)
Cu (ကြေးနီ) နှင့် (CH3COO) 2Fe () ကို မည်သို့ တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
Fe (သံ) ပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်သည် (CH3COO) 2Cu (အအေးခံထားသော စပါးညှိများ၊ ဗီးနပ်စ်၏ သလင်းကျောက်များ၊ အလယ်အလတ် ကြေးညှိများ၊ Diacetic acid ကြေးနီ(II) ဆား၊ Diacetoxycopper(II)၊ ကြေးနီအက်ဆစ်၊ Bisacetic acid ကြေးနီ(II) ဆား၊ ကြေးနီပုံဆောင်ခဲ)၊
ဤကိစ္စတွင်, သင်ရုံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိမရှိကြည့်ရှုရန်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် (CH3COO) 2Feတုံ့ပြန်မှုရဲ့အဆုံးမှာပေါ်ထွန်း။
သို့မဟုတ်အောက်ပါဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေမဆိုလျှင် (CH3COO) 2Cu (Crystallized verdigris; ဗီးနပ်စ်၏ Crystals; ကြားနေ verdigris; Diacetic acid copper copper (II) salt; Diacetoxycopper (II); Copper acetate; Bisacetic acid copper (II) salt; Copper crystal))
ဓာတုတုံ့ပြန်မှု Fe နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်မေးခွန်းများ + (CH3COO)2Cu → Cu + (CH3COO)2Fe
ဓာတ်ပြုခြင်း Fe (သံဓာတ်) နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ
Fe (သံ) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ Fe (သံ) ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတ်ပြုမှု ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ဓာတ်ပြုခြင်း (CH3COO)2Cu (အအေးခံထားသော စပါးညှိများ၊ ဗီးနပ်စ်၏ သလင်းကျောက်များ၊ အလယ်အလတ် ကြေးညှိများ၊ Diacetic acid ကြေးနီ(II) ဆား၊ Diacetoxycopper(II)၊ ကြေးနီအက်ဆစ်၊ Bisacetic acid ကြေးနီ(II) ဆား၊ ကြေးနီပုံဆောင်ခဲ)၊
(CH3COO)2Cu (အအေးခံထားသော verdigris; Venus of crystals; neutral verdigris; Diacetic acid copper(II) salt; Diacetoxycopper(II)၊ Copper acetate; Bisacetic acid copper(II) salt; Copper crystal) ? (CH3COO)2Cu (အအေးခံထားသော verdigris; Venus of crystals; neutral verdigris; Diacetic acid copper(II) salt; Diacetoxycopper(II)၊ Copper acetate; Bisacetic acid copper(II) salt; Copper crystal) ပါရှိသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။ ဓာတ်ပြုခြင်း
Cu (ကြေးနီ) နှင့် ပတ်သက်သော မေးခွန်းများ
Cu (အအေးခံထားသော verdigris; Venus of crystals; neutral verdigris; Diacetic acid copper(II) salt; Diacetoxycopper(II)၊ Copper acetate; Bisacetic acid copper(II) salt; Copper crystal) ၏ ဓာတုဗေဒနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာကား အဘယ်နည်း။ Cu (ကြေးနီ) ပါ၀င်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် (CH3COO)2Fe () နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ
(CH3COO)2Fe (အအေးခံထားသော verdigris၊ ဗီးနပ်စ်၏ သလင်းကျောက်များ; Neutral verdigris; Diacetic acid copper(II) salt; Diacetoxycopper(II)၊ Copper acetate; Bisacetic acid copper(II) salt; Copper crystal) ? ထုတ်ကုန်အဖြစ် (CH3COO)2Fe () ပါရှိသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ဓာတ်ပြုခြင်းအဖြစ် Fe နှင့်အတူညီမျှခြင်း
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Fe + S → FeS ၁၀ Fe + 2O2 → Fe3O4 Fe နှင့်ညီမျှခြင်းအားလုံးကို reactant အဖြစ်ကြည့်ပါ
reactant အဖြစ် (CH3COO) 2Cu နှင့်အတူညီမျှခြင်း
Crystallized verdigris; ဗီးနပ်စ်၏ကြည်လင်; ကြားနေဝါဒ; diacetic acid ကိုကြေးနီ (II ကို) ဆား; Diacetoxycopper (II)၊ ကြေးနီ acetate; Bisacetic acid copper (II) ဆား၊ ကြေးနီကြည်လင်
Fe + (CH3COO)2Cu → Cu + (CH3COO)2Fe (CH3COO)2Cu + C2H4(အို)2 → Cu(OH)2 + (CH3COO)2C2H4 (CH3COO) 2Cu နှင့်ပါသောညီမျှခြင်းအားလုံးကိုဓာတ်ပြုသည်အဖြစ်ကြည့်ပါ
ထုတ်ကုန်အဖြစ် (CH3COO) 2Cu နှင့်အတူညီမျှခြင်း
2CH3COOH ပါ + Cu (OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Cu 2CH3COOH ပါ + Cu + 3H2O2 → 4H2O + O2 + (CH3COO)2Cu 2CH3COOH ပါ + CuO → H2O + (CH3COO)2Cu (CH3COO) 2Cu ဖြင့်ညီမျှခြင်းအားလုံးကိုထုတ်ကုန်အဖြစ်ကြည့်ပါ